The Incredibles (2004) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
PG 2004 115 min Animation
Animation ခဈြသူမြားအတှကျ အရမျးကွိုကျလှနျးလို့ တငျလိုကျတာပါ…The Incredibles (2004) သညျ IMDb 8/10 Rotten Tomatoes 97% Metacritic 90% Google users 94% ဒါရိုကျတာ Brad Bird ကိုယျတိုငျရေးသားရိုကျကူးထား၍ သရုပျဆောငျ Craig T. Nelson, Samuel L. Jackson, Holly Hunter တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသော Animation, Action, Adventure ဇာတျကားကောငျး တဈကားဖွဈတဲ့အတှကျ ခဈြခွငျးအားဖွငျ့ တငျဆကျလိုကျပါရစေ….
လြှို့ဝှကျထောကျလှမျးရေးမိသားစုတဈစုဟာ သာမနျလူနမှေုဘဝမှာ တိတျဆိတျစှာနဖေို့ ကွိုးစားနခြေိနျမှာ ကမ်ဘာကို ကယျတငျဖို့ အတငျးပွနျလညျသှတျသှငျးခံရတဲ့အခါ ဘယျလိုတှေ ဆကျဖွဈမလဲ ဇာတျကားမှာ ကွညျ့ရှုကွညျ့ကွပါခငျဗြာ….
Animation ချစ်သူများအတွက် အရမ်းကြိုက်လွန်းလို့ တင်လိုက်တာပါ…The Incredibles (2004) သည် IMDb 8/10 Rotten Tomatoes 97% Metacritic 90% Google users 94% ဒါရိုက်တာ Brad Bird ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Craig T. Nelson, Samuel L. Jackson, Holly Hunter တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Animation, Action, Adventure ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ….
လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးမိသားစုတစ်စုဟာ သာမန်လူနေမှုဘဝမှာ တိတ်ဆိတ်စွာနေဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ ကမ္ဘာကို ကယ်တင်ဖို့ အတင်းပြန်လည်သွတ်သွင်းခံရတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲ ဇာတ်ကားမှာ ကြည့်ရှုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ….
Option 1 storage.msubmovie.com 543 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 543 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 543 MB SD (480p)